September 22, 2006, 3:27 pm
တကယ်ပဲရှင်..ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီညတောင်အိပ်ရပါ့မလားမသိဘူး. ဒါပေမယ့် အတိုချုန်းပြောမယ်… ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ပြည်ပရောက်ရင် မြန်မာသံရုံးနဲ့ကင်းကွာလို့မရပါဘူး.. ဘဘကြီးတွေကို သိပ်ချစ်လွန်းတော့ နှစ်စဉ်အခွန်ဆက်သရပါတယ်.. ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာက အခွန်သွင်းရတဲ့စာရွက်ပါ.. သူတို့က ကောက်ခံသလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ မြန်မာလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုချစ်လွန်းလို့ လာရောက်ဆက်သရတဲ့ပုံစံမျိုး `ကျေးဇူးပြုပြီးအခွန်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါရန်´ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကို မြင်လိုက်ရတော့ ခေါင်းတစ်ချက်ညိတ်မိပါတယ်.. သံဝေဂရလို့ပါ.. လက်တစ်လုံးချားလိမ်တာတော့ တကယ်ကို ချီးကျူးထိုက်ပါတယ်.. အခွန်ဆိုတာ မိမိတိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းရာမှာအသုံးပြုနေတယ် ၊နိုင်ငံတော်အတွက် ၊ နောက် ပြည်ပကမြန်မာတွေကိုလည်း လူလိုဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်တောင် ပေးရတာ လက်မတွန့်ပါဘူး.. အခုတော့ အခွန်လည်းပေးရသေး.. တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ ကြောက်ရလွန်းလို့ ထိုင်ရှိခိုးမတတ် ပြောရသေးတယ်.. အရင်တုန်းကများ ဆက်ဆံရေးက အခုထက်ထိပိုဆိုးသေးရှင့်… `ခင်ဗျားတို့အခွန်အလုပ်တင်မဟုတ်ဘူး တခြားအလုပ်တွေကျူပ်တို့မှာရှိသေးတယ်.. ဟိုဘက်မှာသွားထိုင်နေ.. မခေါ်မချင်းထမလာနဲ့´ဆိုပြီးအော်တာလည်း ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်.. သူတို့ကိုအခွန်ဆက်သဖို့ အလုပ်ကနေ နေ့တစ်ဝက်ခွင့်ယူလာရတော့ အမြန်လုပ်ပေးပါသွားတောင်းပန်မိတာ အဟောက်ပဲခံလိုက်ရတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်.. ပေးလည်းပေးရ ဟောက်လည်းခံရဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့ … အခွန်တန်ဖိုးကို ပြောမယ်နော်.. တစ်လကို ၁၂၀ကနေ ၁၅၀ထိ လစဉ်ကြေးပေးရပါတယ်.. လင်းလက်အဖေကတော့ တစ်လကို ၁၅၀ သွင်းရပါတယ်.. ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့သောမြန်မာကျောင်းသားတွေကလည်း လူလည်ကျပါတယ်.. ကျောင်းပြီးချိန်မှာ အလုပ်ထဲဝင်တော့ လစာကိုလိမ်တင်ကြတယ်.. နောက် ၁၀%ကိုပဲ သွင်းရတော့ သက်သာတာပေါ့.. အဲဒါမျိုးဆို နအဖကိုအမြင်ကတ်လို့အားပေးပါတယ်… လင်းတို့သွင်းလိုက်တဲ့အခွန်က လက်နက်နဲ့ သူတို့သက်ဆိုးရှည်ဖို့သက်သက် ပေးရတာဆိုတော့ တစ်စက်မှမသတီပါဘူး..
ခြင်္သေ့ကျွန်းအစိုးရရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ အရင်းရှင်စနစ် ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ အာဏာရှင်စနစ် ၊ အဲဒီ ၂ခုကြားမှာ ကန့်လန့်ခံပြီး ဒုက္ခရောက်ကြတာပါ. များပြားလွန်းတဲ့အခွန်တွေအတွက် အားလုံးက အကြွေးနဲ့မကင်းသလို နှစ်ကုန်ရင် အကုန်တက်တက်ပြောင်တာပါပဲ… မိမိနိုင်ငံအတွက် အခွန်ဆိုတာ ရှိသင့်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မတရားများလွန်းတဲ့အပြင် ထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်နေတဲ့ ဥပဒေတွေကြား အခွန်ဆောင်နေရတဲ့ ပြည်ပကမြန်မာအားလုံး ဒီတစ်သက်နှာခေါင်းဖော်ပြီး အသက်ရှုခွင့်တောင် ရပါ့အုန်းမလား စစ်အာဏာရှင်ရယ်..